Waa maxay waa maxay Vastamku? | RayHaber | raillynews
[06 / 04 / 2020] Garoonka diyaaradaha ee Atatürk iyo Cisbitaalada Sancaktepe Coronavirus waa la dhisi doonaa	coronavirus
HometareenkaWaa maxay Vatman?
Waa maxay Vatman?
14 / 03 / 2019 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY, taraamka
Waa maxay Vatman, muxuu u shaqeeyaa, sidee loo noqdaa? : Gawaarida rakaabka ee loo adeegsado gaadiidka rakaabka ee magaalada, kuna socda jidad gaar ah oo aan wadada la dhigin oo ku shaqeeya koronto, waxaa loo yaqaan taraamka. Dadka adeegsada gawaaridan, kuwaas oo ah taraamyada, waxaa lagu magacaabaa vatman. Patriotism-ka waxaa loo yaqaanaa taraamka / tareenka dhulka hoostiisa mara ee nolol maalmeedka; Waxay noqotay baahi weyn kadib horumarintii tikniyoolajiyadda nidaamyada tareenka iyo muhiimadda ay leedahay gaadiidleyda sida taraamka / metro ee gaadiidka magaalada.
Waddooyinka ayaa guud ahaan ka shaqeeya wadooyinka aan muujin kala duwanaansho badan. Vatman wuxuu ka shaqeeyaa waaxda loo qoondeeyey iyaga. Saacadaha shaqadu waa kuwo dabacsan sababta oo ah sii socodka adeegga iyo nidaamka shiftiga ayaa la adeegsadaa. Oo muxuu doortaa dadku?
Maxay yihiin waajibaadka, Awoodaha iyo Waajibaadka Muwaadiniinta?
Tram / Metro Driver (Vatman), oo waafaqsan mabaadii'da guud ee shirkadda, iyada oo la adeegsanayo qalab, qalab iyo qalab wax ku ool ah, iyada oo la raacayo caafimaadka shaqada, amniga iyo ilaalinta deegaanka iyo shuruudaha tayada iyo tayada xirfadda:
Sameynta jeegag muhiim ah ka hor inta aan la bilaabin tareenka / tareenka,
Isticmaalka taraamka / metro adiga oo hagaajinaaya xawaaraha baabuurka iyo wakhtiga lagu qaato joogsiyada inta lagu jiro safarka iyadoo la raacayo jadwalka socodka,
Inta lagu guda jiro koorsada koorsada, si joogto ah u soco wadada wadada iyo in la raaco digniinta iyo calaamadaha khadka,
Ka taxadar dadka lugta iyo gawaarida inta lagu jiro muddada safarka,
Si loo sameeyo waxqabadyo lagama maarmaanka ah haddii ay dhacdo khasaare iyo shilal, si loo hubiyo in warbixinnada shilalka ay hayso hay'adaha ammaanka iyo dhaqdhaqaaqa,
Si loo raaco tilmaamaha loo soo gudbiyey isaga iyo in la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah,
Ka ilaali kaadhka dayactirka ee tareenka / metro,
Wargelinta iyo hagista rakaabka marka loo baahdo,
Si aad u wargaliso sarreeyaasha rabitaanka iyo cabashooyinka rakaabka.
Waxay fulisaa waajibaadka iyo nidaamyada sida u hoggaansamida shuruucda la xidhiidha caafimaadka shaqada iyo amniga iyo xaqiijinta u hoggaansanaanta.
dumar dumar ah
Sidee loo noqonayaa Vatman?
Ugu horreyntii, kuwa raba inay u shaqeeyaan sidii waddaniyadu waa inayan laheyn wax naafo ah marka loo eego dhinacyada jidhka iyo maskaxda, waa inay awoodaan inay isticmaalaan xubnaha, cagaha iyo xubnaha maqalka ee isku-duwidda, waa inay noqdaan kuwo mas'uul ah, bukaanka, dadka qabta. Dadka leh astaamahan waxay ku shaqeyn karaan xirfad-yaqaan waddaniyadeed si aad ufilan. Intaa ka sokow, in ay noqdaan wadani ah;
Si aad ugu qalinjabiso ugu yaraan dugsiga sare ama u dhiganta
Isagoo qabtay adeeggiisii ​​milatariga
Ma aha in uu ka weynaado 35
Ma jiri karo naafonimo jidheed iyo maskaxeed.
Dadwaynaha ayaa shaqeeya degmooyinka. Degmooyinka ayaa bixiya koorasyo ​​tan marka loo baahdo waddaniyiin. Koorasyada degmooyinka, wadarta 23 bil kasta tababarada farsamada iyo farsamada iyo munaasabadaha lagama maarmaanka ah ayaa la siiyaa musharrixiinta inta lagu jiro koorsada. Musharrixiinta si guul leh u gutay koorsada waxaa la siiyay wareysi qoraal ah iyo mid afka ah, ka dibna shakhsiyaadka ku guulaysta qaybtan si guul leh waxay u bilaabi karaan waajibaadkooda iyagoo ah waddaniyiin.
Kuwa ku guuleysta xirfada wadaniga ah ayaa markaa u wareejin doona tababarayaasha, madaxda dhaqdhaqaaqa, madaxa ganacsiga ama kontoroolayaasha taraafikada.
Waa maxay Shaqaalaha Caadi ahaaneed? Mushaharka, Fursadaha Shaqada iyo Sharciga Shaqada
Waa maxay kaarka caymiska ee Izmirimka, sida loo iibsado, loo dajiyo iyo wax loo weydiiyo Sidee?
Yaa makaaniku yahay Sida loo noqdo makaanik
Sidee loo noqonayaa Fanaan Farsamo ee TÜLOMSAŞ
Antep wuxuu ka dhigayaa Jaantusyada Urfa!
Ma taqaanaa Shiinaha tareenka xawaaraha sare?
Binali Yıldırım: Waxaanu noqonay nidaam tareen ah
Wadamada Badbaadada ah Saldhigga Basku wuxuu ka dhigaa Dalal Caddaan ah Nidaamka Tareenka
Wasiir Arslan, TÜLOMSAŞ wuxuu sameyn doonaa YHT
Safarada Habeennimo ee Magaalada Istaanbuul ee Magaalada Istanbul!
6 vatman, oo isticmaalaya taraag ku yaala Konya, ayaa la siiyay nadiifinta iyo shaqooyinka kale
Gebze Halkalı Xariga Ganacsi 11 Lagu Furay on Daily Test Drive
Saldhiga Varsak ee Saldhiga
Garoonka diyaaradaha ee Atatürk iyo Cisbitaalada Sancaktepe Coronavirus waa la dhisi doonaa